अख्तियारको छानबिनले पढाइ प्रभावित | Educationpati.com
२०७३ चैत्र २५ गते ०१:१९मा प्रकाशित
डोटी । पाँचजना सरकारी अनुदान र दुईजना स्थानीय स्रोतबाट गरी सातजना कार्यरत विद्यालयमा हाल एकजना मात्रै शिक्षक रहेका छन्। साविकको गाउँ विकास समितिबाट दिइएको अनुदान रकममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमाथि छानबिनको क्रममा विद्यालयको पढाइ प्रभावित भएको छ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिका-९ मछन्तोला (साविकको बगलेक गाविस-९) मा रहेको मष्टेश्वर आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरअध्यापन भइरहेको छ तर शिक्षक एकजना मात्रै छन्। स्थायी शिक्षक एक, सट्टा एक, करार एक र राहत दुई गरी सरकारी अनुदानका पाँचजना शिक्षक रहेकोमा अख्तियारले चारजनालाई निलम्बन गरेपछि हाल एकजना करार शिक्षक मात्रै कार्यरत छन्।
साविकको बगलेक गाउँ विकास समितिबाट २०६४/०६५ देखि ०७०/०७१ सम्म विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन भएको ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै परेको बेनामी उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गर्ने क्रममा उक्त अवधिमा क्रमैसँग प्रधानाध्यापक बनेका शिक्षकहरू लक्ष्मण साफी, मुक्तिराज जोशी, सुनिता केसी र वीरबहादुर साउदलाई गत फागुन १७ गते निलम्बन गरिएपछि विद्यालयमा एकजना करार शिक्षक नरबहादुर बोहोरा मात्रै कार्यरत छन्।
चार शिक्षकसँगै साविकको बगलेक गाविसका प्राविधिक धनबहादुर विष्ट र सोही गाविसका तत्कालीन सचिव भीमबहादुर धामी पनि अनुसन्धानको दायरामा छन्। प्राविधिक विष्ट पनि निलम्बनमा छन्। धामी सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महा साउद पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा छन्।
२०७१ साल भाद्र ५ गते पहिलोपटक अख्तियारले उजुरीका सम्बन्धमा विद्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसबेलादेखि भइरहेको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन। उजुरी आएपछि शिक्षकहरूले आफूहरूले कुनै अनियमितता नगरेको जवाफ दिएका थिए। उक्त जवाफपछि कुरा मिलेको सोचेका शिक्षकहरूलाई करिब एक वर्षपछि अख्तियारको टोली विद्यालयमा पुगेपछि मात्रै मुद्दा जारी रहेको जानकारी भयो।
'५ कक्षासम्मको विद्यालयमा म एक्लैले के गर्नु?', हाल कार्यरत शिक्षक बोहोरा भन्छन्, 'त्यसैले वार्षिक परीक्षा चाँडै गरे।' सोमवार वार्षिक परीक्षा सकिएको बोहोरा बताउँछन्। शैक्षिक सत्र २०७२ सम्म कक्षा ८ सम्म पढाइ भइरहेको विद्यालय २०७३ को शैक्षिक सत्रदेखि ५ सम्ममा झरेको बोहोराले बताए।
उनले भने, 'गाउँ विकास समितिले पनि अनुदान दिन छोडेपछि निजी स्रोतबाट राखेका दुईजना शिक्षकलाई तलब खुवाउने स्रोत नभएपछि विद्यालय तल झार्नुपरेको हो।' एकातिर आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्यितारमा उजुरी पर्‍यो, अर्कोतिर जिल्ला शिक्षा कार्यालय डोटीको अनुदानमा बनेको दुईकोठे भवनको छाना हावाले उडायो, विद्यालयको पठनपाठनमा विस्तारै समस्या हुँदै गयो। अन्ततः विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो।
शिक्षकको आपसी विवादका कारण तत्कालीन प्रधानाध्यापक लक्ष्मण साफीले २०६९ साल मंसिर २९ गते राजीनामा दिएपछि मुक्तिराज जोशी प्रधानाध्यापक भए। जोशीले ०७० पुस २ गते राजीनामा दिएपछि सुनितालाई प्रअ बनाइएकोमा सुनिताले पनि राजीनामा दिएपछि वीरबहादुर साउदलाई प्रधानाध्यापक बनाइएको थियो। चारैजना शिक्षक अहिले निलम्बनमा परेका छन्।
'विद्यालयमा कुनै आर्थिक अनियमितता भएको छैन', निलम्बित शिक्षक जोशीले भने, 'बजेटअनुसार गर्नुपर्ने काम अभिभावकको जन श्रमदानबाट भएको हो, उक्त रकम हामीले विद्यालयको खातामा राखेर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाएका हौं।' आफूहरू माघ २, फागुन २६ र चैत ४ गरी तीनपटक विशेष अदालतमा हाजिर भएको बताउँदै जोशीले बेनामी उजुरी गर्नेले आफूहरूलाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेको बताए।
विद्यालयमा अध्ययनरत एक सय ९८ बालबालिकाका अभिभावकलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यालयको अवस्था के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ। एक अभिभावकले भने, 'यो कारबाही कहिलेसम्म हुने हो रु तबसम्म हाम्रा बालबालिकाको जिम्मा कसले लिने हो ? ' अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ ।